Fanadihadiana: tena ratsy toerana ny indostria malagasy | NewsMada
Fanadihadiana: tena ratsy toerana ny indostria malagasy
Navoaka, omaly, ny vokatry ny fandrefesana ny toeran’ny indostria eto Madagasikara nataon’ny firaisan’ny indostria (Alliance pour l’industrialisation). Hita ao anatin’izany firasan-dia izany ny Sim, ny Fivmpama, ny Fivondronan’ny mpiasa (CTM), ny Fiombonan’ny sendika (SSM), ary ny Vondron’ireo mpahay toekarena (Crem).
Najoro, ny volana desambra 2017, io « Alliance » io, nandrefy ny indostria amin’ny lafiny ankapobeny, ny sosialy, ary ny hoavy. Tena ratsy toerana, izay ny azo ilazana ny tontolon’ny indostria. Raha alahatra ny manahirana azy ireo : tsy fandriampahalemana, tsy fahampian’ny angovo, saran’ny fitaterana, fifaninanana tsy ara-dalàna, fotodrafitrasa ratsy, fahefa-mividy ambany loatra, masonkarena lafo. Samy mahita ireo olana rehetra ireo ny mpampiasa sy ny mpiasa. Henjana indrindra ny tsy fandriampahalemana, 78 %, ary 68,75 % amin’ireo tompon’ny orinasa ny mahita fa sakana goavana ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa.
Taona maro izay, tsy hita ny fandraisana anjaran’ny fanjakana. “Misy fotsiny izany minisiteran’ny Indostria izany fa zara raha manana tetibola”, hoy Rakotondrasanjy Rivo, avy ao amin’ny Fivmpama sady filoha lefitry ny “Alliance”. Andraikitry ny fanjakana, ohatra, ny miady tsy hisian’ny fifaninanana tsy ara-dalàna, ny manampy amin’ny famokarana herinaratra.
Na amin’ny lafiny ankapobeny na amin’ny lafiny sosialy, tena ratsy toerana ny indostria malagasy. Tsy misy fiovana firy ny isan’ny mpiasa, mbola ratsy karama koa ny mpiasa. Koa raha tombanana ny politikan’ny fanjakana momba ny indostria, ho an’ny enim-bolana ho avy, 42, 5% tsy misy fiantraikany ; 17,5% mahita ny hoavy tsara. Matoky ny hoavy amin’ny ankapobeny kosa ny “Alliance”, nanome isa 48 amina 100, raha samy mandray andraikitra tandrify azy ny rehetra.